Tag: Mpandinika media sosialy | Martech Zone
Tag: Mpandinika media sosialy
Porofonay fa mitombo ny fahalianana amin'ny haitao marketing!
Sabotsy, Oktobra 4, 2014 Alahady Oktobra 5, 2014 Douglas Karr
Mitombo ny mpihaino anay. Tsy dia kely akory satria vita tsikelikely tao anatin'ny folo taona lasa. Mitombo isam-bolana izy io satria maro ny orinasa no tototry ny fanapahan-kevitra ilaina amin'ny resaka teknolojia marketing. Martech Zone dia nitombo efa ho 40% isan-taona ny isan-taona… averin'ny antsalany maherin'ny 100,000 isam-bolana miaraka amin'ireo mpamandrika mailaka ~ 75,000 (ankehitriny eo amin'ny CircuPress izahay - ilay sehatra mailaka namboarinay ho an'ny WordPress). Ny Twitter, Facebook,
Ireto misy toro-hevitra LinkedIn 33 ho anao hoka!
Zoma, Septambra 26, 2014 Alahady 15 Janoary 2017 Douglas Karr
Tsy dia be loatra ny andro izay tsy mamaky fanavaozam-baovao avy amin'ny LinkedIn, mifandray amin'ny olona iray ao amin'ny LinkedIn, mandray anjara amin'ny vondrona iray ao amin'ny LinkedIn, na mampiroborobo ny atiny sy ny orinasa ato amin'ny LinkedIn. LinkedIn dia làlan-tokana ho an'ny orinasako - ary faly aho tamin'ny fanavaozana nataoko tamin'ny kaonty premium tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ireto misy toro-hevitra mahafinaritra avy amin'ny mpitarika haino aman-jery sosialy sy ny mpampiasa LinkedIn avy amin'ny tranonkala. Aza hadino ny mizara
Indostrian'ny varotra haino aman-jery sosialy
Alahady Oktobra 14, 2012 Sabotsy, Oktobra 13, 2012 Douglas Karr
GO-Globe.com dia namorona infographic, ny Social Media Marketing Industry, izay mifantina angon-drakitra manan-danja avy amin'ny tatitra momba ny Social Media Examiner's 2012 Social Media Marketing Industry. Ny Infographic dia mandrakotra ny fironana farany momba ny haino aman-jery sosialy, ny fanambin'ny haino aman-jery sosialy, ny paikadin'ireo mpivarotra media sosialy ary maro hafa. Raha ny fahitako azy dia miseho ny fanamby lehibe. Na dia manatsara hatrany aza ny teknolojia misy antsika dia mbola miady mafy ny orinasa hampiasa media sosialy tanteraka, hahita ny influencers, handrefesana ny tamberim-bola, hanangana mpihaino,
Navoaka i Safari 4 - Mahery vaika!
Asabotsy, Jona 13, 2009 Talata, Septambra 24, 2013 Douglas Karr
Vao nametraka ny Safari vaovao indrindra (OS X Leopard, kinova 4) ary misy fiasa roa mahafinaritra efa hitako. Ny fanampiana azo tsapain-tanana indrindra dia ny topy maso mialoha an'ireo tranokala notsidihinao indrindra (hmmm… zavatra nindramina tao amin'ny Firefox?). Ny endri-javatra manan-danja kokoa hitako, na izany aza, dia ny endri-javatra fizahana (hmmm… zavatra mety nindrana avy amin'ny Firebug?) Toy ny any amin'ny mpitety tranonkala rehetra, Safari 4 dia tselatra haingana satria vao nivoaka izy. Matetika dia mitaky
Ny Internet Explorer dia mieritreritra indray ny fampiasana azy
Alakamisy Oktobra Oktobra 4, 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
IE7 dia manana tanjaka lehibe, saingy nanoratra koa aho hoe maninona aho no mino fa very ny fizarana tsena ary mahasosotra ny fampiasan'ny mpampiasa antonony… manokana ny rafi-menu izay mivelatra amin'ny ankavanan'ny sy ankavanan'ny fampiharana. Nanoratra momba ny IE7 aho ary mampihoron-koditra mahatsiravina, iray volana lasa izay. Toa ny ekipa IE dia namerina nandinika ny paikadin'izy ireo tamin'ny famoahana ny IE7 ho fikojakojana. Ny bara fisakafoanana izao dia ho